Laba Askari oo katirsan ciidamada badda ee Puntland PMPF oo lagu dilay Bosaso – Radio Daljir
Laba Askari oo katirsan ciidamada badda ee Puntland PMPF oo lagu dilay Bosaso
Nofeembar 14, 2018 5:21 b 0
Askari katirsan ciidamada badda Puntland PMPF ee uu tababaro Imaaraatka Carabta ayaa dilay laba ka mid ah ciidamada oo ay saaxiibo wada ahaayeen, waxaana askariga dilka gaystay lagu xiray magaalada Bosaso.
Dilka ayaa waxaa uu ka dambeeyey kadib kaftan dhexmaray askartan oo xiliga uu dilku dhacayay ku wada sugnaa goob lagu qayilo, iyadoo askariga dilka gaystay uu carooday sidaasina dilka ku gaystay, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay taliska ciidamada badda ee askartan ay ka tirsanaayeen oo ku saabsan dhacdadan.
Ciidamada badda Puntland PMPF ayaa waxaa dhaqaale ku bixiya Imaaraatka Carabta, waxaana sidoo kalle ay qayb ka qaataan dagaalka ay dowladda Puntland kula jirto Al-shabaab iyo Daacish.
Golaha Ammaanka ee QM oo cuno qabataynta hubka ee Eriteriya maanta qaadaya